Indlela umzabalazo wamandla osichaphazela ngayo esi sibini | IBezzia
Indlela umzabalazo wamandla osichaphazela ngayo esi sibini
UMaria Jose Roldan | 08/06/2021 22:00 | Ubudlelwane
Amandla ahlala esesinye sezizathu zongquzulwano okanye iimilo kwizibini ezininzi. Umzabalazo wamandla uhlala uhleli kwaye uyinto yesiqhelo, into engancedi sibini ngokwabo. Izinto ziya zisiba mbi ngakumbi xa iqela elifumana amandla lisisebenzisa ngenxa yesibonelelo salo kwaye lingalisebenzisi ukuphucula ubudlelwane nelinye iqela.
Kwinqaku elilandelayo siza kuthetha ngomzabalazo wamandla kwesi sibini kwaye ungonakalisa kangakanani ubudlelwane.
1 Umzabalazo wamandla kwesi sibini
2 Iingxaki ngenxa yomzabalazo wamandla kwesi sibini
Umzabalazo wamandla kwesi sibini
Ukuhambisa amandla ngaphakathi kwesi sibini ayisiyonto ilula okanye elula. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo iimfuno zabantu bobabini kwaye ukuba oku akwenzeki, kunokwenzeka ukuba izinto zizophela kakubi. Into eqhelekileyo kukuba ngokuhamba kwexesha, amandla akhankanywe apha ngasentla alinganiswa kwaye umntu ngamnye uwasebenzisa ngokufanelekileyo ngamaxesha athile.
Ayinakuba kukuba kubudlelwane obuthile, ngumntu omnye kuphela onalo gunya kwaye elinye iqela lilinganisela ngokwalo ekuthatheni izigqibo zomnye. Ixesha elingaphezulu, ukongamela okunje kunokubangela ingozi enkulu kwiqabane kwaye kubangele ukuba ubudlelwane buthathaka ngendlela eyingozi.
Iingxaki ngenxa yomzabalazo wamandla kwesi sibini
Umzabalazo wamandla owenzeka rhoqo ngaphakathi kwesibini, kunokubangela iingxaki ezininzi:
Kungenzeka ukuba umzabalazo wamandla ubangelwa yinto yokuba aba bantu babini bafuna ukuthatha eyona ndima iphambili. Bobabini abantu bafuna ukulunga ngalo lonke ixesha, kubangela iingxabano kunye nokulwa kuzo zonke iiyure zosuku. Akukho namnye kubo onika ingalo yakhe ukujija kwaye oku kwenza ukuba ukuhlala kunye kube nzima kwaye kunzima. Kwezi meko kubalulekile ukuba uvelane nobuninzi kunye neqabane kwaye uzibeke ezihlangwini zenye.
Ngendlela efanayo, ukungqubana okungafaniyo kunokuvela kwimeko yokuba kungabikho mntu phakathi kwesi sibini, Ndifuna ukuthatha amandla kunye nolawulo. Ukunqongophala kokhuseleko kwesi sibini kungaphezu kokucacileyo kwaye oku kuphelisa ukonakalisa ubudlelwane ngokwabo. Kule meko, kubalulekile ukuveza izimvo ezahlukeneyo kwaye ukusuka apho uthathe inyathelo ngokudibeneyo.
Ngamafutshane, umzabalazo wamandla ngaphakathi kwesibini unokuthathwa njengesiqhelo kwaye akufuneki ube mbi, Logama ukongamela kunye namandla kungabangeli monakalo kwelinye icala lesibini. Kuya kubakho ulungelelwaniso kumandla umntu ngamnye analo kulwalamano. Into engalunganga kwesi sibini kukuba ukwabiwa kwamandla sisizathu seengxabano eziqhubekayo zazo zonke iintlobo.
Ukuba oku kuyenzeka, kubalulekile ukuba uhlale phantsi uthethe ngendlela ezolileyo kwaye umisele uthotho lwezivumelwano ngokwenyani yokuba ngubani olawulayo kwesi sibini. Ngokufanelekileyo, amandla aya kutshintsha izandla ngokwezigqibo ezahlukeneyo ekufuneka zenziwe kubudlelwane. Ngaphandle koko imeko inokungalawuleki ngazo zonke izinto ezimbi ezibandakanya esi sibini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Indlela umzabalazo wamandla osichaphazela ngayo esi sibini
Ungayibulala njani intsholongwane ukugqobhoza inkaba
Izibonelelo zomkhwa wokuhamba